‘अब राजनीति सफा गर्ने आन्दोलन चलाऔं’ | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← राष्ट्रपतिका लागि नमूना गाडी तयार, भीख माग्दा कति उठ्यो ?
धुजा-धुजा ‘न्याय’ →
हामी सबैले अहिले समृद्धि समृद्धि भन्दैछौं । नेकपा यही भन्छ, कांग्रेस यही भन्छ । नागरिक समाज, बुद्धिजीवी यही भन्छन् ।समृद्धि नभई हुँदैन । तर, यत्रो सम्भावना भएको देशमा पनि हामीले किन अहिलेसम्म समृद्धि र विकास हासिल गर्न सकेनौं ? हिजो हामीले के भन्यौं भने संक्रमणकाल छ, संविधान बनाऔं, संक्रमणकाल टुंग्याऔं अनि विकास गर्न सक्छौं । संक्रमणकाल पनि सकियो, संविधान पनि बन्यो ।
अझै पनि देशमा किन विकास हुन सकिरहेको छैन ? ’cause समृद्धिमा पुग्न नदिने हामीसँग अझै एउटा फलामको ढोका छ । त्यो फलामको ढोका भनेको राज्यमा, राजनीतिक पार्टीहरुमा र समाजमा व्याप्त चरम भ्रष्टाचार हो ।
त्यसकारण हामीले भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान चलाएर, सुशासन कायम गरेर समृद्धिमा पुग्नुबाहेक अर्को कुनै विकल्प छैन । यस’bout सबैले छातीमा हात राखेर सोच्नुपर्ने अवस्था छ ।
र, दोस्रो, जनता सधैं सचेत भइराखनुपर्छ । जनताको सचेत निगरानी हुनुपर्छ । पाँच वर्षमा चुनाव हुने र पाँचवर्षसम्म जे जे गर भनेर छाडा छोडिदिने अनि प्रतिपक्षले पनि विरोधै मात्रै गरिरहने परम्परा सही होइन । त्यसैले जनताको सचेत निगरानीलाई लोकतन्त्रको अभिन्न अंग बनाइनुपर्छ । यसका लागि नागरिक समाजको भूमिका अपरिहार्य छ । ’cause सत्ताको चरित्र स्वाभाविकरुपले दमनकारी र निरंकुश चरित्रलाई अंकुश लगाउनका लागि नागरिक समाज सधैं सक्रिय हुनुपर्छ ।